वरोमा व्यंजनहरू Thermomix | थर्मोराइकिप्स (पृष्ठ २)
कफि र कोको फ्ल्यास
यी कफी र कोको फ्लान्सको साथ तपाईं Thermomix® varoma मा बनेको मिठाईमा तपाईंको मनपर्ने स्वादहरूको मजा लिनुहुनेछ।
रायोको पोशाकको साथ आलुको गार्निश
गार्निश वा एपीरिटिफको रूपमा, रायोको पोसाकको साथ यी आलुहरूले तपाईंको स्वाद र सादगीको लागि, खुशी पार्दछन् तपाईंलाई अचम्ममा।
क्रन्ची सुशी राइस बेसको साथ साल्मन टार्टारे
एक crunchy सुशी चावल आधार मा स्वादिष्ट र आश्चर्यजनक साल्मन tartare। जापानी खाना को प्रेमीहरु को लागी।
उमालेको चकलेट केक
यो स्टीम्ड चकलेट केक तन्द्रे बिना बनेको छ र स्तर खाना पकाउन र भेरोमाबाट अधिक प्राप्त गर्नका लागि उपयुक्त छ।
कोडेकमा अण्डाहरू parmentier र truffle संग
पार्मेन्टीर र ट्रफलको साथ कोकोटमा अण्डाहरू तपाइँको थर्मोमिक्सको साथ स्तरहरूमा पकाउनको लागि एक उत्तम विधि हो।
ड्रेसिंगको साथ तरकारी गार्निश
एक सरल, स्वस्थ गार्निश जुन बनाउन सजिलो हुन्छ। तपाईंसँग यो लगभग minutes० मिनेटमा तयार हुनेछ, यसलाई तयार हुनको लागि आफैलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्!
9 नुनिलो नमस्कार
आश्चर्यचकित गर्न यी प्रेमी कस्टर्डहरूको साथ तपाईं सजिलै गरी सम्पूर्ण परिवारको लागि रमाईलो खाना वा बेलुकाको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ।
भेरोमामा बनेको delicious स्वादिष्ट मिठाई
भेरोमामा बनेको delicious स्वादिष्ट मिठाईहरू जसले तपाईंलाई खाना पकाउने स्तरको सेवा दिन्छ र तपाईंको Thermomix बाट अधिक प्राप्त गर्दछ।
फूलगोभी क्रिम, मासु पाई र भुनी एप्पल एन प्यापिलोटको साथ पूरा मेनू
यस मेनूको साथ फूलगोभी क्रीम, मासु पाइहरू र स्याउ प्यापीलोटमा पोष्ट गरिएको छ, तपाईंसँग menu 45 मिनेट भन्दा कममा एक साधारण मेनू हुनेछ।
Zucchini र आलुको नरम क्रीम, कोकोट अण्डा र भुनी एप्पल एन papillote को साथ पूरा मेनू
हामी तपाइँलाई तपाइँको Thermomix मा प्याचलोकमा zucchini र आलुको नरम क्रीम, कोकोट अण्डा र पोलेको स्याउको साथ कसरी पूरा मेनू बनाउने भनेर देखाउँदछौं।
कोशोटमा अण्डाहरू च्याउ, बेकन र ग्रुयरको साथ
कोशोटमा मशरूम, बेकन र स्टीम्ड ग्रुइरको साथ मलाई क्रीमयुक्त अण्डाहरू तयार गर्नु भोरोमा र तपाईंको थर्मोमिक्सको साथ सजिलो छ।
तपाईंको नुस्खा पुस्तकमा9आवश्यक फ्लान्सहरू
हामी तपाईंलाई थर्मोमिक्सले बनेको essential वटा अनिवार्य फ्लान्सहरू देखाउँदछौं जुन तपाईंको स्वाद, बनावट र सरलताको लागि तपाईंको रेसिपी पुस्तकमा एक ठाउँ योग्य छ।
9 रेसिपी भेरोमाको साथ प्रेममा पर्न
यस कम्पाइलेसनमा तपाईले rec वटा व्यंजनहरू भेरोमा प्रेममा फेला पार्नुहुनेछ र स्वस्थ र स्वस्थ तरिकामा तपाइँको थर्मोमिक्सबाट अधिक लाभ लिन सक्नुहुनेछ।
टमाटर सॉस र सिमी संग मांसपेशिहरु
सिपी कीरा तयार पार्ने धेरै सरल तरीका। हामी तिनीहरूलाई भापमा, भेरोमामा, जबकि सस गिलासमा पकाउँदछ।
रोजमेरी संग भुटेको आलु
यो नुस्खा अद्भुत छ। हामीसँग लसुन को ड्रेसिंग को सबै स्वाद संग स्वादिष्ट र कोमल भुटेको आलु हुनेछ ...
अक्टोपस र झींगा संग बीन्स
सिमी, अक्टोपस र झींगाको साथ द्रुत थर्मामिक्स स्टू जो एक उत्तम स्टकको प्रयोग गरी तयार गरिन्छ। प्रत्येक काटो स्वादको विस्फोट हो।
एक मूल मिलफुइलले julienned बन्दकोबीले स्तरयुक्त स्वादिष्ट मौसमी कीमाकार मासु र क्रीम सॉसका साथ भरिएका।
टमाटर सॉसको साथ टर्की मीटबल
टर्माको चटनीको साथ टर्की मीटबलहरू थर्मोमिक्ससँग बनाउने ती हल्का र सजिलो रेसिपीहरूमध्ये एक हो र तपाई हप्ताको कुनै पनि दिनमा सेवा दिन सक्नुहुन्छ।
प्यापीलोटमा भुनेको स्याउ
प्यापीलोटमा भुनी स्याउ एक सजिलो मिठाई हो जुन तपाइँले वर्षभरि रमाउन सक्नुहुन्छ र त्यो पनि बनाउन सजिलो छ।
शतावरी र ग्रूयरको साथ कोकोटमा अण्डाहरू
कोस्टेटमा शतावरी र ग्रुएयरको साथ अण्डा तयार पार्नु तपाईंको सोच्ने भन्दा सजिलो छ। भेरोमाको फाइदा लिनको लागि एक आदर्श विधि।
बदाम र पेपरिकाको साथ मासु पाई
यी पप्रिका मूंगफली मीटलोफ्स स्वादिष्ट र यातायात गर्न सजिलो हुन्छ तपाईले तिनीहरूलाई समुद्र तट, पोखरी, वा पैदल यात्रामा लिन सक्नुहुनेछ।
Chirlas संग सम्पूर्ण गहुँ spaghetti
Chirlas संग अभिन्न स्पेगेटी, एक अतुलनीय विधि जुन हामी Thermomix मा पूर्ण रूपमा तयार गर्दछौं, सजिलो, छिटो र धेरै सहज।
नर्डिक शैली स्टीम सामन
नॉर्डिक शैली ताजा स्टीम्ड सामन। यो 30० मिनेट भन्दा कममा तयार पारिन्छ, जब प्यापिलोटमा स्टिम् हुन्छ, यो धेरै रसिलो र धेरै स्वादको साथ हुन्छ।
प्यारो Ximenez सॉस संग पोर्क टेंडरलिन
पेड्रो Ximenez चटनी संग पोर्क टेंडरलिन को लागि नुस्खा यति सजिलो र सरल छ कि यदि तपाइँ Thermomix संग धेरै अनुभव छैन भने पनि राम्रोसँग बाहिर जान्छ।
भेरोमामा एप्पल पाई
भेरोमामा यो साधारण एप्पल पाई स्तरहरूमा पकाउन र तपाईंको Thermomix को सक्दो फाइदाको लागि उपयुक्त छ।
व्यक्तिगत कुखुरा र पिस्ता केक
यी स्वादिष्ट व्यक्तिगत कुखुरा र पिस्ता केकहरू तपाईंको Thermomix को भेरोमा सजिलै र सरल रूपमा बनाइन्छ।
मरीन गरिएको zucchini र बैंगन
स्वादिष्ट र बहुमुखी यि ती तरकारीहरू पनि छन्। तिनीहरू स्टीम्ड हुन्छन् र त्यसपछि एक प्रकारको अजवाइन, लसुन र खोर्सानी विनाग्रेटको साथ म्यारिनेट गरिन्छ।
बेकन र भुनेको फूलगोभीको पेस्टेको साथ स्पेगेटी
बेकन र भुनेको फूलगोभी पेसोको साथ स्पेगेटी, पेस्टोको सबै स्वादका साथ तर फूलगोभीको स्वादिष्ट कोमलतासँग।
टर्की रोल फल र हेमले भरिएको
क्रिसमस मेनू तयार गर्दा फल र हेमले भरिएको यो टर्की रोल तपाईंको सहयोगी हुनेछ। यो अग्रिम र स्टीम बनाउन सकिन्छ।
Velouté du ब्यारी
यो The Christmas लाई तपाईंको Thermomix को साथ यो velouté du ब्यारी तयारी गर्न सबैभन्दा सरल हुनेछ। एक राम्रो र सुरुचिपूर्ण फूलगोभी क्रीम तपाईंको पाहुनाहरूलाई खुशी पार्न।
यी केरा एन प्यापिलोटे अति उत्तम पाकेको टुक्राहरूको फाइदा लिनका लागि र भेरोमाको फाइदा लिन पनि उत्तम विचार हुन्।
आलू र गाजर काजू संग गार्निश
सक्कली आलु र गाजर गार्निश जुन हामी हाम्रो मासु वा माछा व्यञ्जन सँगसँगै गर्न सक्छौं। यसमा परमेसन, काजू पनि छ ...
टर्की र veggie चिसो कटौती
टर्की र थर्मोमिक्सले बनेको तरकारीको चिसो मासु एकदम सरल छ। केही चरणहरूमा तपाईसँग हल्का डिनरको लागि मासुको नुस्खा तयार हुनेछ।
तरकारी र रातो मिर्च सासको साथ कुखुराको फिललेटहरू
हामी तपाईंलाई रातो मिर्च सास र स्टिमेड तरकारीका साथ कुखुराको फिल्टहरू कसरी तयार गर्ने भनेर सिकाउँछौं। एउटा डिश जसको लागि हामीलाई केवल Thermomix चाहिन्छ।
भेरोमा Zucchini र झींगा केक
तपाईंको Thermomix को varoma मा स्वादिष्ट zucchini र झींगा केक बनेको। माछा-आधारित डिश जसले तिनीहरूलाई खानेछ।
भाना सलाद टुना र कडा उडाइएको अण्डाको साथ
रंगीन, सुन्दर, सरल र स्वस्थ, यो चामलको सलाद हो जुन टुना र कडा उमालेको अण्डाको साथ हामीले प्रस्ताव गर्छौं। यो एक Thermomix मा बनेको छ र यो स्वादिष्ट छ।
चिकन, zucchini र गाजर चिसो कटौती
तपाईंको थर्मोमिक्सको भेरोमामा बनाइएको कुखुराको चिसो, चिउनी र गाजरको यस चिसो मासुको साथ तपाईंसँग तपाईंको डिनर वा अधिक अनौपचारिक पार्टीहरूको लागि चिसो डिश हुनेछ।
चीज र कागतीको साथ स्टीम्ड स्पन्ज केक
पत्ता लगाउनुहोस् कि यो उफमाइएको पनीर र निम्बू स्पन्ज केक बनाउनको लागि कत्तिको सजिलो छ सुरूबाट समाप्त गर्न तपाईंको थर्मोमिक्सको साथ। कुनै ओभन र कुनै समस्या छैन।
परम्परागत भन्दा फ्लेमेन्को अण्डाहरूको लागि एक विधि धेरै कम क्यालोरिक। हामी चोरिजो र सेरानो ह्यामलाई पकाएको ह्यामको साथ बदल्न गइरहेका छौं।
तरकारीका साथ बासमती चामल
साधारण बासमती चामलको सलाद तरकारीहरूसँग जुन हामी छोटो समयमा तयार गर्न सक्छौं र हाम्रो फूड प्रोसेसर प्रयोग गरेर।
लसुन झींगाको साथ धानको समुद्री खाना सलाद
लसुन झींगाको साथ धानको स्वादिष्ट समुद्री खाना सलाद, तपाइँको चामलको सलादको लागि सबै भन्दा खास स्पर्श। स्टार्टर वा डिनरको रूपमा उत्तम।
उमालेको ग्लुटन मुक्त स्पन्ज केक
यो उमालेको ग्लुटन मुक्त स्पन्ज केक तपाईंको Thermomix को साथ समाप्त गर्न सुरू देखि तयार गर्न सकिन्छ। एक सजिलो, रसिलो र धेरै फ्लफि काट्ने
फूलगोभी र क्रिन्चि बेकन, पेस्टो बाचेमल र काजूको साथ चुरा हुन्छ
आश्चर्यचकित गर्ने एउटा विधि: हल्का पेस्टो बेचामेलको साथ स्टीम्ड फूलगोभी, भित्रबाट कुरकुरे बेकन भाग र काजू र दलिया चुरा
दुईको लागि सुन्तलाको साथ साल्मन
भेरोमा कन्टेनरमा पकाएको सालमनको दुई भागहरू। धेरै सुन्तला स्वाद र पागल द्वारा बनेको एक विशेष सॉसको साथ।
टमाटर कम्पोटे र बटरिएको चामलको साथ स्टीम्ड कोड
टमाटर कम्पोटको साथ भारोमाको साथ दर्शक कोड माटेको चामलको साथ गार्निश। हल्का, छिटो, सरल र धेरै चिल्लो।
हेम र स्याउको साथ sirloin लक
के तपाईंले हेम र एप्पल कम्मर सिरलोइन बनाउन कत्ति सजिलो भएको देख्नुभयो? तपाईंले भर्खरै यसलाई टास गर्नु पर्छ वा भर्नुहोस्, खैरो ...
मूल विधि: उमालेको आलु
उमालेको आलुको लागि यो आधारभूत विधिको साथ, तपाईंको मासु वा माछा भाँडाका लागि सरल, स्वस्थ र सजीलो गार्निशको आनन्द लिनुहोस्।
कट्टलफिस र आलुको न्यानो सलाद
सानो कटलफिस सेवा गर्ने अर्को तरीका: सलादमा। यसमा आलु, फूलगोभी र मन्डारिनको जुसको साथ बनाईएको सबैभन्दा मूल ड्रेसिंग छ।
थर्मोमिक्समा माछा बर्गर
केहि माछा बर्गर जुन ह्यामबर्गर बनमा, रोटीको केही टुक्रामा वा कुनै साधारण गार्निशको साथ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
तरकारी गार्निशको साथ टुना आमलेट
हामी एक Thermomix मा एक टूना आमलेट र केहि स्टीम सब्जी पकाउन जाँदैछन्। ट्रे र भेरोमा कन्टेनरमा सबै चीज एकै समयमा पकाइनेछ।
साल्मन र ग्रीन बीन सलाद
हामी सामन, आलु र हरियो बीन्सको एक धेरै पूर्ण र स्वादपूर्ण सलाद तयार गर्न जाँदैछौं। यसलाई बनाउनको लागि, हामी सबैमा धेरै नै एक पूर्ण र स्वस्थ ताजा सामन सलाद बनाउनेछौं। यसमा तरकारीहरू, निलो माछा, पागल र अतिरिक्त कुमारी जैतूनको तेल छ।
एगप्लान्ट्स एला पिज्जायोला
हामी तपाईंलाई युबर्जिन पकाउन विचार दिन्छौं। हामी यसलाई केवल थर्मोमिक्स प्रयोग गरेर बनाउँनेछौं किनकि हामी यहाँ तरकारीहरू पकाउनेछौं, टमाटरको चटनी र एगप्लान्ट पकाउने बिभिन्न तरीका: टमाटरको चटनी, मोजारेला र ओरेगानोको साथ। एक तयारी जसको लागि हामी केवल हाम्रो थर्मोमिक्स प्रयोग गर्छौं।
अजमोदको तेल र लसुनको साथ पेपरिका गालहरू र स्टिमेड तरकारीका साथ २ का लागि पूर्ण मेनू
आज मँ पापरिका गालका साथ २ का लागि पूर्ण मेनू तपाईंमा ल्याउनेछु र अजमोदको तेलको साथ उमालेको तरकारीहरू ...
आलु चीज र भरिएको सालमनले भरिएको छ
रसीला र रमाईलो स्टीम्ड आलु मटरले भरिएको, पग्लेको पनीर मिक्स र स्मोक्ड सामनको साथ माथि छ। एक खुशी!
पाइपर्राडाको साथ साल्मन
स्टीम्ड सालमन सँगै पाइपरादा, यी तातो दिनहरूको लागि धेरै रोचक विकल्प। स्वस्थ, स्वस्थ र छिटो।
डबल कुकिंगमा मरीनेट गरिएको पसलहरू
काजुन-शैली मरीनेडको साथ स्वादिष्ट र रसीला पोर्क पसलहरू, डबल कुकि with (स्टीम्ड र बेक्ड) को साथ तैयार। मुख्य पाठ्यक्रमको रूपमा आदर्श।
बियर सॉस र लसुन चामलको साथ चिकन
रसदार चिकन ड्रमस्टिकक्स बियर सॉसको साथ र साबुन लहसुन चामलको साथ गार्निश। अग्रिम तयारीको लागि एक मुख्य पकवानको रूपमा आदर्श।
समुद्री ब्रिम फ्लेटहरू एन प्यापिल्टमा स्टीम ब्रोकली फ्लोरेटहरू सहित
प्यापिलोटमा गिल्टहेड समुद्री मसलाको स्वादिष्ट फिल्टहरू साथ स्टीम्ड ब्रोकोली फ्लोरेटहरूसँग। स्वस्थ र पौष्टिक नुस्खा जसले हामीलाई भेरोमाबाट अधिक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
Zucchini र मकैको क्रीमको पूरा मेनू, सुगन्धित जडिबुटी र उमालेको तरकारीहरूको साथ कुखुरा
यी रेसिपीहरूसँग तपाईंसँग तरलहरूसँग राम्रोसँग खान र तपाईंको थर्मोमिक्सबाट अधिक प्राप्त गर्न क्रीम र कुखुरामा आधारित पूर्ण प्रकाश मेनू हुनेछ।
मिनी कुखुरा र अनानास skewers स्वाद cous cous साथ cous
तिनीहरू मिनी कुखुरा र अनानास skewers, पकाएको भेरोमा, र couscous स्वाद संग अनानास र बादाम crocanti को गन्ध संग। यो केवल प्लेट १० मात्र होइन, तर स्वस्थ, स्वादिलो, र colorful्गीन र स्वादिष्ट पकवान हो। यदि तपाइँसँग एक विशेष खाजा वा डिनर छ, कुनै श doubt्का बिना, यो एक डिश हो कि तपाइँ वास्तविक शेफ जस्तै छोड्नेछ।
डबल बनावट नरिवल फ्लान
स्वादिष्ट र रसिलो नारियल डबल बनावटको साथ फ्लान। Thermomix को साथ बनाउन को लागी सजिलो छ र पूरै परिवार को लागी एक नुस्खा तपाई varoma मा पकाउन सक्नुहुन्छ।
तातो हरियो बीन, मकै र टुना सलाद
हरियो सिमी, मकै र टुनाको साथ स्वादिष्ट न्यानो सलाद। एउटा स्टार्टरको रूपमा वा डिनरमा मुख्य पकवानको रूपमा उत्तम। बच्चाहरूलाई सागपात खानको लागि आदर्श।
क्लासिक भील, तर यस पटक फरक प्रस्तुतीकरणका साथ: बगैचा मीटबलहरू। मुख्य डिशको रूपमा उत्तम र हाम्रो फ्रिजरमा विकल्पको रूपमा उत्तम। घरका सानाका लागि उत्तम।
भोल्यू-वा-भेन्ट्स यसको रस र रास्पबेरी जाममा तीतरहरूले भरिएको छ
रसीबेरी जामको साथ रसकोप्ट भोल अउ भेन्ट्स आफ्नै रसमा फेसेन्टले भरिन्छ। क्रिसमसमा प्रभावित गर्न एउटा अचम्मको डिश।
स्टीम्ड क्यालाट्रावा रोटी
स्टीम्ड क्यालाट्रावा रोटी प्रयोगको पूरा विधि जहाँ हामी स्वाद स्प्याज केक र अन्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्छौं एक स्वादिष्ट मिठाई सिर्जना गर्न।
पिन ईन् पिपिलोटको साथ
प्यापीलोटमा कुखुराको साथ सिमाका लागि यो सरल नुस्खाको साथ तपाईले भेरोमा र तपाईंको थर्मोमिक्सबाट अधिक प्राप्त गर्नुहुनेछ।
एप्पल र बेकन सलाद
यो एप्पल र बेकन सलाद गर्मी को नुस्खा भण्डार मा एक नयाँ क्लासिक हो। बस धनी तर ताजा र अधिक मूल।
तरकारी ratatouille र अंडे अंडे
पोच गरिएको अण्डाको साथ तरकारी राटाटुइल। अण्डाहरू र रोटीको एक राम्रो टुक्राको साथ यस डिशको साथ तरकारीको सबै स्वादको आनन्द लिनुहोस्।
आधारभूत विधि: सेतो चावल भेरोमामा
भेरोमाको साथ यी साधारण कप सेतो चामलको साथ तपाईं कसरी थर्मोमिक्सबाट अधिक फाइदा लिन सिक्नुहुनेछ, जबकि समय र ऊर्जा बचत गर्ने।
पोफ्नको दानाले उमालेको रोटी
पोफ्नको दानाले उमालेको रोटी। फरक तरीकाले पकाउने विधिको साथ सँधै स्वादको आनन्द लिने अर्को तरिका। सानो टुक्रा को प्रेमीहरु को लागी।
पाइन नट ग्रेटिनको साथ Zucchini पाई
पाइन नट ग्रेटिनको साथ Zucchini पाई। तरकारी र अण्डाहरू एक धेरै पूर्ण डिशमा सबै स्वादको साथ जुन घरका ल्याक्टोनियाले हामीलाई दिन्छ।
फूलगोभी र गाजरको साथ सुपर स्वादिष्ट साइड म्यास
यसको तयारीमा विशेष टचको साथ सुपर स्वादिष्ट फूलगोभी र गाजर प्यूरी: लसुन र पेपरिका फ्राई। गार्निशको रूपमा उत्तम।
बचेमलको साथ फूलगोभी
सजीलो र स्वस्थ फूलगोभी भेरोमा मा पकाइन्छ र पनीर र béchamel संग पकाइएको छ। स्टार्टरको रूपमा आईडियल जब हामीसँग धेरै डिनरहरू छन्।
भगवा सॉसको साथ स्टीम्ड मीटबलहरू
रसदार स्टीम्ड मीटबलहरू एक चिकनी केशर सासको साथ। एक स्वस्थ आहार को लागी कम क्यालोरीको साथ यो थाल कसरी बनाउने पत्ता लगाउनुहोस्।
काला, चहकिलो चामल र पोर्टोबो करीमा वन्य साल्मन स्कीभर्स
स्वादिष्ट जंगली साल्मन स्केभर्स मशरूम, चावल र काली करीको साथ, विदेशी स्वादहरूका प्रेमीहरूको लागि एक अद्वितीय पकवानको रूपमा आदर्श।
थर्मोमिक्समा रसिलो र स्वादिष्ट भुनी कुखुरा, परिवारसँग साझेदारी गर्न आदर्श। सुविधाजनक र सजिलो, यो नुस्खा शुरुआतीहरूको लागि उत्तम छ।
ब्रसेल्स बेकमेलसँग अंकुरित छ
ब्रसेल्स स्प्राउटहरू तयार पार्ने सजिलो तरीका त उनीहरू मार्फत पकाइन्छन्। एक स्वादिष्ट पकवान बेकमेललाई धन्यवाद।
फूलगोभी अल अजोराइरो
फूलगोभी अल अजोराइरो Thermomix को साथ बनाउन को लागी एक सरल र सजिलो नुस्खा हो। पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी यो स्वस्थ र सस्तो विधि बनाउने।
अनानास संग चिकन सलाद
कुखुरा र अनानासको साथ बनेको स्वादिष्ट र विदेशी सलाद र पास्ता, अण्डा, हरियो पात र गुलाबी साससँग पूरक। एकल डिशको रूपमा आदर्श।
चुना संग उमालेको मुर्खा
एक अद्भुत, वास्तवमै सरल र धेरै रंगीन ऐपेटाइजर: Thermomix मा पकाएको लाइम सासको साथ स्टीम्ड ककल्स।
लिंबु इमल्सनको साथ भाँडा र तरकारीहरू
मूल स्फूर्ति माछा र तरकारीहरूको लागि सरल नुस्खा मूल लिम्बू इमल्शनको साथ प्रयोग गरियो। हल्का दोस्रो डिश जसमा हामी केवल हाम्रो थर्मोमिक्स प्रयोग गर्छौं।
भुटेको कालो मिर्च र ट्युना सलाद जीरा ड्रेसिंगको साथ
रातो खुर्सानी, टुना र एक उत्तम लसुन र जीरा ड्रेसिंगको साथ बनेको स्वादिष्ट र रसदार सलाद। रोटीको टोस्टको साथ लिनको लागि आदर्श।
यी सलाद फ्लान्सको साथ तपाईं ग्रीष्मकालीन व्यंजनहरूको सबै स्वादको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ। यो सरल र उपयोगी छ।
हामी तपाईंलाई कसरी Thermomix को साथ एक फोडा बनाउने देखाउन। एक सजिलो, स्वस्थ, प्रकाश र पोषणयुक्त प्याक डिनरका लागि तरकारी विधि।
Aubergines couscous र मशरूम भरिएको
मांसविहीन सोमबारको लागि स्वस्थ विधि खोज्दै हुनुहुन्छ? कूसस र मशरूमले भरिएका यी aubergines तैयार गर्नुहोस् र स्वादको आनन्द लिनुहोस्।
मच्चा चिया फ्लान
विदेशी अण्डा कस्टर्ड माच्चा ग्रीन चियाको एक मूल स्पर्शको साथ बनाईएको। मलाईदार बनावट र आश्चर्यजनक स्वाद। मिठाईको रूपमा आदर्श।
शलगम साग र लसुन संग आलु
के तपाईंको शरीरले तपाईंलाई स्वस्थ व्यंजनका लागि सोध्छ? शलगम साग र लसुन को साथ आलु को लागी यो नुस्खा प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं यसको सरलता र स्वाद मनपर्दछ।
सुअर सॉस र कारमेलको साथ पोर्क टेंडरलिन
सुँगुरको टेंडरलिन भेरोमामा भुनिउने झोलामा तयार पारियो, सँगसँगै एक विदेशी सोया सस र कारमेल पनि छ। एक काटिएको खाजा को रूप मा आदर्श।
ताजा चीज फ्लान
क्रीमयुक्त र नाजुक फ्लान ताजा चीजबाट बनेको र कन्डनडेड मिल्कले समृद्ध बनाएको। मीठो दाँतको लागि एक अद्वितीय आनन्द।
रसिलो र स्वादिष्ट ग्रीक मौसाका मासु र आलुले बनेको छ। एक धेरै विशेष béchamel सॉसको साथ कभर गरिएको। यो पारिवारिक भोजनको लागि आदर्श हो।
बेक्ड करी सॉसको साथ फूलगोभी
स्वादिष्ट पकाएको फूलगोभी, करी र ताहिनीबाट बनेको स्वादिष्ट सासको साथ। माछा साथ गर्न आदर्श।
सुन्तला भिनाग्रेटको साथ उमालेको ब्रोकोली
यो बाफ गरिएको ब्रोकोली रेसिपीले हामीलाई गर्मी को ज्यादतीहरू अफसेट गर्न मद्दत गर्दछ। यो सुगन्धित र स्वादिलो ​​सुन्तला भिनाग्रेटको साथ परोसियो।
घरेलु आडू कस्टर्डहरू
द्रुत बनाउनको लागि र धेरै सजिलै पत्ता लगाउन सकिने सामग्रीहरूको साथ। यी घर बनाइएको आडू पुडिंग एक आवर्ती मिठाई हुनेछ।
गैलिशियन अक्टोपस वा फेरा अक्टोपस
हाम्रो थर्मोमिक्सको साथ तयार गरिएको प्रामाणिक फीरा अक्टोपस वा गलिसियन अक्टोपसको राम्रो अनुमानित।
Bulgur भरिएको टमाटर
टमाटर को शाकाहारी नुस्खा मोटा bulgur र तरकारीहरू भरिएको, Varoma मा वाफ पकाएको र सुगन्ध र स्वाद भरिएको।
Zucchini स्पेगेटी कार्बोनेरा
Zucchini spaghetti कार्बनारा राम्रो विकल्प हो यदि हामी यो क्यारीरीहरू बिना क्यालोरीहरू थपेर यो सासको मजा लिन चाहन्छौं।
डिनरका लागि सहयोगी, द्रुत र सरल विधि। ससको गहनता पकाएको आलुको साथ पूर्ण रूपमा मिल्दछ। चीज प्रेमीहरूको लागि आदर्श
जर्मन शैली को चिकन सलाद
धेरै ताजा र पूर्ण चिकन सलाद, गर्मी को लागी आदर्श हो किनकि यो पूर्व तयार हुन वा समुद्र तट वा पोखरीमा सार्न सकिन्छ।
थर्मोमिक्समा Aubergines "भुने"
हामी तपाइँलाई तपाइँको थर्मोमिक्समा केहि औबर्गिनहरू कसरी बनाउने भनेर सिकाउछ जुन भुटेको जस्तो देखिन्छ।
तातो दिनमा माछा लिनु र हाम्रो Thermomix को भेरोमा कन्टेनरबाट अधिक लिनु राम्रो विचार हो।
क्लैम वा "भोन्गोल" संग Fettuccine
क्लैमको साथ स्पेगेटी, स्वादिलो ​​वाइन सॉसको साथ गार्निश, यो नुस्खालाई पास्ता प्रेमीहरूको लागि उत्तम पकवान बनाउँदछ।
Zucchini पनीर, अखरोट र ह्यामले भरिएको
Zucchini पनीर, अखरोट र हेम को भरिएको एक सजिलो, द्रुत र धेरै सन्तुलित नुस्खा हो।
गाढा दूध पुडिंग
कन्डेन्स्ड मिल्क पोडिंग्सको चिल्लो बनावट र स्वाद हुन्छ जुन बेवास्ता हुँदैन। तिनीहरू पनि सम्भव भएसम्म बचत गर्न वरमामा बनेका छन्।
तरकारी प्या प्यालोट र sa सस
स्वादिष्ट र स्वस्थ तरकारी प्यापीलोट यसको sa सॉसहरूको साथ यसलाई स्वादिष्ट बनाउँदछ
निम्बू स्ट्रबेरी पन्ना कोटा
निम्बू र स्ट्रबेरी पन्ना कोटा एक यस्तो नुस्खा हो जसले हामीलाई स्वादहरूको स्वादिष्ट संयोजन र मौलिक प्रस्तुतीकरणको साथ धेरै हल्का बनावट प्रदान गर्दछ।
वरोमामा पछाडि डोराडा
सामान्य र स्वस्थ समुद्री गाम पछाडि तयार पारियो, खुर्सानी र प्याजले सजाएको। कम क्यालोरी आहारहरूको लागि आदर्श।
भूमध्यसागरीय marinade संग खरायो
यो खरायो नुस्खा एक स्वादिष्ट भूमध्य Marinade संग तैयार छ कि यो एक धेरै विशेषता स्वाद दिन्छ। यो वरोमामा पनि तयार छ।
धूम्रपान भरिएका आलु
यी धुवाँयुक्त भरिएका आलुहरू तयार पार्न तपाईं ट्राउट, कोड र साल्मनको मिश्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको मनपर्ने धुम्रपान गरिएको माछा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
क्लासिक अण्डा कस्टर्डको यस प्रकारको साथ तपाईं आफ्नो पाहुनाहरूलाई यसको स्वादिष्ट बनावट र मूल स्वादको साथ आश्चर्यचकित गर्नुहुनेछ।
तरकारी गार्निशको साथ गिल्थहेड समुद्री बीम
वरोमामा नुनको साथ बनेको गिल्थहेड र तरकारीको गार्निशको साथमा, माछा पकाउन सजिलो, सफा र आरामदायक तरीका छ, जुन रसदार, स्वस्थ र स्वादिष्ट हुन्छ।
गाजर र फूलगोभी फ्लान्स
गाजर र फूलगोभी पुडिंगहरू बच्चाहरूको लागि राम्रो खानको लागि रमाईलो र मौलिक विकल्प हो किनभने तरकारीको साथै उनीहरूसँग दुध र अण्डा हुन्छन्।
चेरी टमाटर सॉसको साथ हेक फिललेटहरू
स्प्रिम्ड प्याज सॉस र चेरी टमाटर, एक स्वादिष्ट, स्वस्थ र कम क्यालोरीको डिशको साथ वर्मामा स्टीम्ड हाक कम्मर।
द्रुत र धेरै स्वस्थ डिनरका लागि एक शानदार विचार: तातो चटनीमा सिपी कीरा। मसलादार खानाको प्रेमीहरूको लागि, यो तपाईंको नुस्खा हो!
ब्याटरमा फ्राइड आर्टिचोकसको एक साइड डिश वा एपेटाइजर। तिनीहरूलाई कोमल बनाउन, हामी तिनीहरूलाई भारोमामा पकाउँछौं। त्यसोभए हामी तिनीहरूलाई बल्छी बनाउँछौं र तेलमा फ्राई गर्छौं।
पीच चिकन रमाउँछ
एक स्वादिष्ट, स्वादिलो, नाजुक, मौलिक एपेटाइजर कुखुराको स्तन, आडू र मेयोनेजबाट बनाइएको। होममेड वा स्टोर-टोकट टोस्टसँग उत्तम छ।
तातो लीक सलाद
न्यानो लीक सलाद एक सरल, तयार गर्न द्रुत र स्वस्थ नुस्खा हो। यो तौल नियन्त्रण आहारको लागि पनि हल्का र उत्तम छ।
नौगट सॉसको साथ साल्मन
नउगट चटनीको साथ वरोमामा पकाइएको एक स्वादिष्ट साल्मन, जुन हामी घर बनाउदा नौगट क्रीम कसरी बनाउने भनेर जान्ने छौं।
कोकोटमा रानीलाई अण्डाहरू
कोकोटमा रानीको लागि अण्डाहरू आधारभूत उत्पादनहरूमा आधारित धेरै पूर्ण विधि हो जुन बच्चाहरू र कुनै भोक नभएको व्यक्तिले मनपर्दैन।
दुई कुकमा भेडाको भेडाको खुट्टा
रसीला र कुरिलो suckling भेडाहरूको खुट्टा, भेरोमा-भुनी र बेक्ड। यस क्रिसमसमा मुख्य डिशको रूपमा आइडियल।
डिहाइड्रेटेड मशरूमहरूको साथ मांसपेशि
डिहाइड्रेटेड मशरूम भएको मांसपेशि समुद्र र माउन्टेन डिश हो जुन हामी वर्षको कुनै पनि समयमा तयार गर्न सक्दछौं। स्वस्थ, प्राकृतिक र कम क्यालोरी।
डोल्मास: पातहरू मासु र चामलले भरिन्छ
टर्कीबाट ताजा विदेशी डोलमस, प्रकाश मुख्य पाठ्यक्रमको रूपमा र बेलुकाको खानाको लागि आदर्श।
कद्दू सास र जंगली शतावरी संग स्टीम्ड समुद्री बास
एक स्वस्थ, प्रकाश र धेरै स्वादिष्ट पकवान। एक भापले बनेको समुद्री बास, जुन कद्दूको चटनी, जंगली शतावरी र चेरी टमाटरको स्टीमको साथ वरोमामा बनाइएको थियो। तपाईं यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ।
Zucchini spaghetti साथ उकालेको सालमन
Zucchini Spaghetti नुस्खा संग स्टीम्ड सालमन एक सजिलो, सरल, सन्तुलित र धेरै स्वस्थ नुस्खा हो जुन २ minutes मिनेटमा तयार हुनेछ।
सेतो वाइन सॉसको साथ मंकफिस
सेतो वाइन सॉसको साथ यो मंकफिश एक सजिलो डिश, हल्का, धेरै स्वस्थ र यसको स्वाद ठूलो छ। माछा वरोमामा पकाइन्छ जबकि सस बनाईरहेको छ।
बहुरंगी चिकन सलाद
कुखुरा, आलु र तरकारीहरूसहित रंगीन सलाद। गर्मीका दिनहरूको लागि उत्तम स्टार्टर।
रोमेस्को सॉसको साथ भेरोमा सॉसको साथ लीक्स
भेरोमाका साथ लीकहरूले रोमेस्को सॉसको साथ प्रयोग गर्दछन्। एक उत्तम स्टार्टर कम फ्याट र शाकाहारीहरूका लागि आदर्श।
ब्रोकोली र टेपेनेड सलाद
साधारण ब्रोकोली र टेपनाडे सलाद वरमामा बनेको छ र २० मिनेट भन्दा कममा तयार हुन्छ। योसँग अरुगुला, उमालेको अण्डा र परमेसन चीज छन्।
आलुहरू बटोर अण्डा र ट्रफलको साथ साल्मोरजोले भरिएका थिए
भरी भरी आलुहरू, उमालेको, सल्मोरेजोले भरिएका र बटेर अण्डाहरू र ट्रफलको साथ शीर्ष। गर्मी को लागी एक स्टार्टर को रूप मा आदर्श।
नो बेक ब्राउनीज
तिनीहरू एक क्षणमा बनाइन्छन् र यसको लागि हामीलाई केही मोल्ड र हाम्रो थर्मोमिक्स मात्र चाहिन्छ। यी ब्राउनहरू भेरोमा कन्टेनरमा पकाइन्छन्।
ताजा सेतो asparagus पिस्ता vinaigrette साथ
क्रिस्पी र स्वादिष्ट प्राकृतिक सेतो शतावरी, एक स्वादिष्ट भिनाग्रेटको साथ धोई र काटिएको पिस्ताको साथमा।
होममेड सॉसमा वरोमा मीटबलहरू
भरोमाको साथ बनाइएका उत्कृष्ट मीटबलहरू र एक घरेलु तरकारीमा आधारित सॉसको साथ। बच्चाहरू र कम फ्याट डाईटहरूको लागि आदर्श।
Briouat वा मोरक्कन मीट रोल
स्वादिष्ट र कुरकुरा ब्रीउट्स वा मासु रोल ईंट वा फिलो पास्तामा बेर्ने, मोरक्कन ग्यास्ट्रोनोमीको विशिष्ट। शुरुआतको रूपमा आदर्श।
सासन, हेम र चीजमा मशरूमको साथ साल्मन एन प्यापिलोट
मशरूम, हेम र चीजको साथ धेरै स्वस्थ साल्मन एन प्यापिलोट। भेरोमा पूर्ण डिश पकाउँदा स्वस्थ पहिले बनाउनुहोस्।
Asparagus, ब्रड बीन र बेकन केक
यो प्रेमी शतावरी, फराकिलो बीन र बेकन केक एक प्रकारको भूभाग हो जसले तपाईंलाई सजिलै ताजा र स्वस्थ मौसमी उत्पादनहरू समावेश गर्न मद्दत गर्दछ।
वरोमा ओट दुधको साथ फ्रेन्च टोस्ट
परम्परागत टोरिजासको स्वस्थ र हल्का संस्करण: ओट दुधको साथ र वरोमासँग पकाइएको।
स्वादिष्ट झिम्काइएको आलु, क्यानरी टापुको विशिष्ट, मासु वा माछाको लागि गार्निशको रूपमा आदर्श, वा स्टार्टर वा आवरणको रूपमा। मोजो पिकान सॉसको साथ सेवा गर्नुहोस्।
हल्का शतावरी रेसिपी, वरोमामा सजिलो र तयार। सबै स्वाद र स्प्यानिश ग्यास्ट्रोनोमीको परम्परागत व्यंजन को रंग संग।
पेपरिकाको साथ सिपी कीरा
तेल र पेप्रिकाको साथ सिसाईएको सिपी र पकाएको आलुहरूद्वारा बनाइएको धेरै साधारण विधि। यो नुस्खा विशेष रूपले डाइटिंगको लागि उपयुक्त छ।
हल्का नमकीन कद्दू र गाजर कप केकहरू
हल्का नमकीन केक, कद्दू र गाजर, एक स्टार्टर वा माछाको साथको रूपमा आदर्श। कम क्यालोरी आहारहरूको लागि उत्तम।
केपर सॉसमा मीटबलहरू
स्वादिष्ट सुँगुरको मासु र गोमांस मीटबलहरू आलु र केपर सॉसको साथ प्रस्तुत गरियो।
लसुन कुखुरा भारोमा मा पकाइन्छ
कम क्यालोरी आहारहरूको लागि आदर्श डिश: लसुनको कुखुरा, भाँडामा रहेको झोलामा पकाइएको, भेरोमा कन्टेनरमा स्टीम्ड।
सिरिलिन piquillo सॉस भरिएको
पोर्क टेंडरलिन बेकन, मिरी र पनीरले पक्विलो मिर्च सॉसमा नुहाईन्छ, भरिएको र धेरै स्वादिष्ट पकवान जुन आलु वा तरकारीहरूसँग सजावट गर्न सकिन्छ।
सेतो वाइन सॉसमा अpes्गुरको साथ बाफ गरिएको टर्बोट
स्टीम टर्बोट, अ gra्गुरको साथ, सेतो वाइन सासमा। वरोमा र थर्मोमिक्सको साथ बनाईएको एक स्वादिष्ट विधि, जुन गाह्रो छैन।
रूसी फूलगोभी सलाद
फूलगोभीबाट बनेको विभिन्न रूसी सलाद। रातको खानाको रूपमा वा ठूलो भोजनको लागि एक प्रकाश स्टार्टरको रूपमा आदर्श।
सुन्तला सॉसको साथ हेक
एक धेरै साधारण डिश, कम क्यालोरी, तयार गर्न सजिलो र एक ठूलो परिणामको साथ। माछा नारंगी सासको साथ वरोमामा पकाइन्छ, एक धेरै चिल्लो सास जुन रसको स्वाद हुन्छ, र बच्चाहरूले यसलाई मन पराउँछन्।
कुकसस र पिस्ताको साथ चिकन तेरियक्की
क्युसस र पिस्ताको साथ विदेशी कुखुरा तेरियक्की। एक पोषण राम्रो सन्तुलित मुख्य पकवानको रूपमा आदर्श। कम क्यालोरी आहारहरूको लागि आदर्श।
मकारोनी केक एक महान स्रोत हो, सजिलो र सस्तो। यो स्वादिष्ट पास्ता डिश समय भन्दा पहिले तयार गर्न सकिन्छ र पछि तातिन्छ, बच्चाहरूले यसलाई मन पराउँछन् र काममा बोक्नु सजिलो हुन्छ।
उमालेको सिपी कीरा
तिनीहरू एक क्षणमा बनाइन्छन्, साधारण सामग्रीहरूको साथ र नतीजा यसको प्रमाणित हुन्छ। यी स्टीम्ड मसलहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ कि तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुनेछ!
उमालेको भुनी मिर्च र निप्पल चीज रोल
भुनी मिर्च र निप्पल चीजले भरिएका सजिलो स्टीम्ड रोलहरू। एक स्वस्थ नुस्खा जुन अनगिनत गार्निशसँग संयोजन गर्न सकिन्छ।
आलुको ओछ्यानमा फोइको साथ अण्डाहरू फ्याकियो
म्यास गरिएको आलुको ओछ्यानमा आराम गरीएको अण्डा र फ्युइको केही स्लाइसहरू कि गर्मीमा अलि घुलिनुहोस्। Thermomix को साथ पूर्ण रूपमा बनाइएको एक साधारण डिश।
भाँडो फिन मासु, ह्याम र बेकनले भरिएको छ
रसिलो र सारमी भील फिन मासु, हेम र बेकनको भरिनेछ। पोखरीमा, समुद्री तटमा, क्याम्पसाइटमा जानुहोस् वा साथीहरूसँग पिकनिकको लागि आदर्श हो।
चामल र झींगा सलाद
यो धनी चामल र झींगा सलाद गाउँ गाउँ जान तपाईंको मनपर्ने पकवान हुनेछ। यो पौष्टिक छ, बनाउन सजिलो छ र यातायात गर्न सजिलो छ।
तरकारीहरू एन प्यापिलोट बनाउनको लागि सजिलो र धेरै स्वस्थ पकवान हो। गहन स्वादको र उनीहरूले सबै पोषक तत्वहरूको संरक्षण गर्छन्। खानाको लागि एक राम्रो विकल्प
गार्निशको साथ ट्राउट
हामी एक साधारण गार्निश को लागी हाम्रो ट्राउट धन्यवाद समृद्ध गर्दछौं। र यदि तपाईं अर्को माछा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्! राम्रोसँग पकाइएको यो पनि अभूतपूर्व हुनेछ
Thermomix मा "भुने" काली मिर्च
पत्ता लगाउनुहोस् कसरी मरिच तयार पार्छ जुन हामी भेरोमा बनाउँदछौं तर त्यो थर्मोमिक्सको साथ भुटेको पेपर जस्तो देखिनेछ। एक सहयोगी को रूप मा आदर्श, aperitif।
लीक सॉसको साथ हेक
हाम्रो नुस्खाको साथ लीक सॉसको साथ स्टीम्ड हक कसरी बनाउने र स्टीम्ड माछा, रसीला र कोमलको आनन्द लिने तरिका पत्ता लगाउनुहोस्। धेरै धनी!
हामी तपाईंलाई थर्मामिक्सको साथ चकलेट फ्लान कसरी बनाउने भनेर देखाउँदछौं, यो स्वादिष्ट मिठाईको आनन्द लिनको लागि एक धेरै सजिलो विधि। यहाँ कसरी तयारी गर्ने सिक्नुहोस्!
गोमांस रोल प्यारीका सॉसमा ह्याम र चीजले भरिन्छ
भील रोलहरू प्याप्रिका सब्जी सॉसमा हेम र चीजसँग भरिन्छन्, एक थर्मोमिक्सले बनेको सम्पूर्ण परिवारका लागि उपयुक्त स्वादिष्ट र स्वस्थ नुस्खा।
हामी तपाईंलाई कसरी शतावरी quiche, एक crunchy आधार मा शतावरी को एक हल्का स्वाद संग एक उत्तम नुस्खा तयार गर्न को लागी देखाउन। स्वादिष्ट!
साइडरको साथ Monkfish
यदि तपाईं साइडरको साथ माछाको लागि रेसिपीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं कसरी तपाईंको औंलाहरू चाट्नका लागि थर्मोमिक्सको साथ साइडरमा स्वादिष्ट मोनफिस पकाउने सिक्नुहुनेछ।
हामी तपाइँलाई सिकाउँदछौं कि कसरी हाम र बाचेमल ग्रेटिनको साथ स्वादिष्ट लीक रोलहरू पकाउन सकिन्छ, बच्चाहरूलाई पनि मनपर्दछ भनेर तयार गर्ने एउटा सजिलो विधि।
एप्पल कम्पोटको साथ होराकाटा टोर्रिजहरू कसरी बनाउने सिक्नुहोस्, एक घरेलु नुस्खा जसले यस विशिष्ट इस्टर डेजर्टमा फरक छुन्छ।
मरीन गरिएको म्याकेरेल
Thermomix संग अचार मकरेल पकाउन यो घर बनाएको नुस्खा को लागी धेरै सजिलो धन्यवाद छ कि यस माछा को प्रेमीहरु खुशी पार्नेछ। काेशिस गर!
अदुवा प्यानाकोटाको साथ झींगा
अदुवाको प्यानकोटाको साथ केही झींगा पकाउँनुहोस्, काम नलाग्ने पनाकोटा बनावटमा एक उत्तेजक क्षमताको साथ कामोत्पादक चरित्रको एक नुस्खा।
क्लैम संग आलु
हामी तपाईंलाई सिकाउछौं कि कसरी क्लैमले आलु बनाउँदछ, थर्मोमिक्समा र धेरै छोटो समयमा तयार गर्न धेरै सजिलो स्ट्यु। तपाईंको भोजनको लागि उत्तम पहिलो पाठ्यक्रम।
विन्स सॉसको साथ इबेरियन मिलफेल
विन्स सॉस, एक श्रमशील तर सजिलो नुस्खाको साथ एक Iberian मिलफुइल पकाउनुहोस्। तपाइँका पाहुनाहरूका लागि एक अति उत्तम खाजा।
भरिएको टर्की रोल
केरामेलयुक्त प्याज र मीठा प्याक्विलोको साथ हामी जाँदैछौं केही स्वादिष्ट भरिएका टर्की रोलहरू पकाउनुहोस्। आफ्नो औंलाहरु चाट्न।
भरिएको चिकन रमाइलो
थर्मामिक्समा बेकन, हेम र चीजले भरिएको कुखुराको पकाउने चीजहरू कसरी पकाउने सिक्नुहोस्, एक धेरै धनी विधि जुन तपाईं सासको साथ दिन सक्नुहुन्छ।
Thermomix मा आलु संग समुद्री बास
कसरी Thermomix मा आलु संग समुद्री बास बनाउन यो नुस्खा को लागी माछा प्राप्त गर्न को लागी र एक स्वादिष्ट परिणाम संग धन्यवाद।
ब्रोकोली र निलो चीज संग मकारोनी
ब्रोकोली र निलो पनीरको मकरोनी एक स्वस्थ र पौष्टिक पकवान हो जसको साथ हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि हाम्रो आहार विविध र सन्तुलित छ।
केरा र दालचिनी फ्लान्स
Thermomix को साथ तयार गर्न को लागी घर बनाइएको केरा र दालचीनी फ्यान पकाउन सजिलो विधि, एक धेरै सजिलो र द्रुत मिठाई। ती स्वादिष्ट छन्।
भुटेको झोलामा आलुको साथ कुखुरा
Thermomix को लागी आलु संग कुखुरा को लागी यो नुस्खा संग धेरै रसिलो चिकन फिलाहरु को तैयार। ओभनमा ग्रेटिन पछि तिनीहरू अत्यन्त कोमल र खस्ता हुन्।
एक सरल तर धनी टमाटर सॉसको साथ यस नुस्खाको साथ Thermomix मा रसदार रूसी स्टेक्स कसरी पकाउने पत्ता लगाउनुहोस्।
केसरको सिपी कीरा
केसरको सिपी र यस सेर्मोमिक्सको लागि सेतो वाइनको नुस्खाको साथ, तपाईंले आफ्नो भोजनको लागि स्वादिलो ​​स्टार्टर पाउनुहुनेछ।
ह्याम संग मटर "विशेष"
ह्याम, अण्डा र आलुको साथ मटरको रेसिपी एकदम थोरमिससँग पकाइएको यस विधि चरण-दर-चरण नुस्खालाई धन्यवाद।
Thermomix को साथमा र भट्टी भाँडाको भाँडा प्रयोग नगरीकन भाँडा बनाइएको रोटी बनाउने विधि। यो स्वादिष्ट छ
गर्म, भिनाग्रेटको साथ Leek, मशरूम र अखरोट केक
एक गर्मी भिनाग्रेटको साथ रिच लीक, मशरूम र اخरो केकको लागि नुस्खा जुन तपाईं तातो र चिसो दुवै सेवा गर्न सक्नुहुनेछ।
स्क्विड Modena vinaigrette भरिएको
Thermomix का लागि चरण by-चरण रेसिपीको साथ मोडेना विनाइग्रेट ससको भरवाट स्क्विड कसरी तयार गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्।
Zucchini कावा र रोजमरीले भरिएको
मलाई मासुले भरिएको क्रीमी zucchini खाना पकाने को विधि जसको कावा र रोजमेरीको सुगन्धले यसलाई विशेष बनाउँदछ। उनीहरू कसरी थर्मामिक्समा बनेका छन् जान्नुहोस्।
लेमन सास र Sauteed मटर संग चिकन
थर्मामिक्समा बनाइएको निम्बूको चटनी र कुटेको मटरको साथ कुखुराको नुस्खा पौष्टिक छ र यसले बदाम, च्याउ र अरू धेरैसँगै खान सक्छ।
शतावरी संग अण्डाहरू बेनेडिक्ट
आफैलाई अन्डा बेनेडिक्टको Thermomix को शतावरी संग यस नुस्खा द्वारा बहकाउन दिनुहोस्। एक सजिलो, पौष्टिक र स्वादिष्ट नुस्खा जुन तपाइँले अब प्रयास गर्नुपर्नेछ!
पास्ता र चिज सॉसको साथ तरकारी रिबन
चीज ससको साथ पास्ता र तरकारीहरू रिबनका लागि नुस्खा सजिलो र धेरै पूर्ण छ। हामी तपाईंलाई थर्मोमिक्सको साथ चरणबद्ध रूपमा यस डिश चरण पकाउने तरिका देखाउँदछौं।
फूलकोली गुलदस्ता को Béchamel सॉस र ह्यामको साथ गार्निश
हामी कसरी थर्मोमिक्स प्रयोग गरेर बुचमेल र हेमको साथ फूलगोभी कसरी बनाउने भनेर वर्णन गर्छौं जुन तपाईं पछाडि चुलोमा ग्रीटिन गर्न सक्नुहुन्छ। एक धेरै सजिलो विधि बनाउनको लागि।
साल्मन प्यापिलोटे तरकारीहरूसँग
तरकारीको साथ साल्मन प्यापिलोटको लागि सरल विधि र तपाइँ कसरी वरोमाको फाइदा लिन सिक्नुहुनेछ
पाइन नट सॉसको साथ स्टीम्ड मीटबॉलहरू
यस नुस्खा बनाउने धेरै स्वस्थ तरीका स्टीम मिटबल्सलाई तड्न आवश्यक पर्दैन।
रायोको भिनाग्रेटको साथ उमालेको तरकारीहरू
तरकारी खानको लागि बिभिन्न तरीका। तोरीको भिनाग्रेटको साथ स्वाद थप्नुहोस्। यो पक्कै तपाईंलाई hook
आलूको सुन्तला र पिल-पाइलको बिन्दुमा मेयोनेजको साथ कोड
भेरोमा बनाइएको स्वादिष्ट कोड र सुन्तलाको टचको साथ घरेलु मेयोनेजको साथ झुन्ड्याइएको छ र आलुहरूको मूल पाइलट पाइलसँगसँगै। मुख्य पाठ्यक्रमको रूपमा आदर्श।
Zucchini मासु र ट्यूना भरिएको
मौलिक zucchini मासु र ट्यूनाको एक मलाईदार मिश्रणले भरिएको। एक स्टार्टर को रूप मा वा एक tupperware खाना को रूप मा आदर्श। तिनीहरू पूर्णतामा स्थिर हुन्छन्।
आश्चर्यजनक शाकाहारी रोल जुन एक एपेटाइजर वा पहिलो पाठ्यक्रमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
टोपिंगको साथ लेमन हेक
निम्बूको साथ हकको स्वादिष्ट प्रकाश डिश जसले हामीलाई समृद्ध र सन्तुलित आहार लिन मद्दत गर्दछ
Parmesan संग हरियो asparagus
सबै भन्दा राम्रो हरियो र वसन्त asparagus र राम्रो Parmesan पनीर संयोजन संयोजन।
उमालेको तरकारीको साथ चामल
भरोमामा बनाइएको क्रन्ची सब्जीको साथ नरम चामलको स्वादिष्ट संयोजन। शाकाहारी र उपयोगी विधि।
हरियो सिमी का गुँडहरू
हरियो बीन गुँडले एक डिश हो जुन म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछ यदि तपाईं स्वस्थ र स्वस्थ आहार खान चाहनुहुन्छ। गर्न सजिलो र त्यो एक फरक प्रस्तुतीकरण।
तपाइँको पाहुनाहरुलाई एक मासु कोउन्ट संग आश्चर्यचकित गर्नुहोस् मासु, टमाटर र मसलेको आलुको साथ बनेको। यो सबै gratin र एक अनौपचारिक प्रस्तुति संग।
यस रेसिपीलाई धन्यवाद छ तपाई सागरका सबै स्वादका साथ फीडुइ बनाउन सक्नुहुन्छ।
न्यानो फूलगोभी सलाद
एक स्वादिष्ट तातो सलाद जहाँ फूलगोभी तारा हो। यदि हामीले अफिसमा खायौं भने यो ध्यानमा राख्ने एउटा विधि हो।
बदाम सासको साथ हेक
बदामको चटनी सेतो माछाको साथ उत्तम छ। तिनीहरूलाई भेरोमामा गर्नुहोस् र तपाईं समय र ऊर्जा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
ब्रोकोली र कुहेको आलुको साथ कद्दू
बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि ब्रोकोली र अन्य तरकारीहरू सहित एउटा थाल कसरी तयार गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्। यसको बनावट र रंगहरूको साथ प्रेममा झर्नुहोस्।
Genoese स्पंज केक हलवा
के तपाईसँग जेनोएज स्पंज केकको केही टुक्राहरू बाँकी छ र तपाईलाई के गर्ने थाहा छैन? यो हलवा प्रयोग गरी यसको स्वादको आनन्द लिनुहोस्।
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईं यो साल्मन केक अग्रिम तयारी गर्न सक्नुहुन्छ? यस क्रिसमसले भान्छाको भट्टीलाई बिदाइ दिन्छ र तपाइँसँगै रमाईलो गर्नुहोस्।
भेरोमामा काँध चुस्ने
एक scrumptious नुस्खा संग आफ्नो परिवार आश्चर्यचकित गर्न चाहानुहुन्छ? हामी तपाईंलाई भेरोमा पकाएको सु pig्ग पिगको केही काँधहरू प्रस्तुत गर्दछौं। तपाईं कति सजीलो देख्नुहुनेछ।
फुलको फूल सासेज र चीज सॉसको साथ
सॉसेजको साथ फूलगोभीका लागि यो नुस्खाको साथ तपाईंसँग एक पूर्ण र धेरै आर्थिक डिनर हुनेछ जुन तपाईंलाई साप्ताहिक बजेटमा मद्दत गर्दछ।